YEYINTNGE(CANADA): Sunday, September 19
19 September 2010 ဒိုင်ယာရီ
19 September 2010 Yeyintnge's Diary
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 9/19/20100အကြံပြုခြင်း
တနင်္ဂနွေ, 19 စက်တင်ဘာ 2010
ဗိုလ်မှူးအောင်လင်းထွဋ်။ ။ အဲဒီအချိန်ခါမှာ စစ်ရုံးမှာရှိတဲ့ စစ်ဦးစီးဗိုလ်မှူးကြီး၊ နောင် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်ဦး ပေါ့လေ။ နောက်တစ်ယောက်က (ဒုတိယ) ဗိုလ်မှူးကြီးခင်မောင် သန်း (စစ်ဦးစီးမှူး - ပထမတန်း) G-1 ပေါ့။ အဲဒီအချိန်အခါမှာ၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမောင်အနေနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်ဦးကော၊ ဗိုလ်မှူးကြီးခင်မောင်သန်း (နောင် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ခင်မောင် သန်း) ကိုကော ကြည့်မရပါဘူး။ ကြည့်မရတဲ့ အကြောင်းရင်းကလည်း အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလူတွေဟာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသန်းရွှေနဲ့ အင်မတန်မှ closed ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ဖြစ် တယ်။ အဲဒီတော့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမောင်က “တင်ဦးကို ငါ စစ်ရုံး မှာ မမြင်ချင်ဘူး” ဆိုတဲ့အခါကျတော့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်ဦးက ဘယ်သူမှ ရာထူးမပေးဘဲ နဲ့ သူ့ကိုယ်သူ ကစထမှူး (ကစထမှူး= ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနစစ်ဆင်ရေးအထူးအဖွဲ့မှူး။ စစ်တိုင်းများ နှင့် အရပ်ဘက် တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် အုပ်ချုပ်ရေးများကို တိုင်းမှူးများအထက်မှ ကွပ်ကဲရသောသူ) ဆိုပြီး တော့မှ ကရင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုသွားပြီးတော့မှ ရှောင်နေရတဲ့ အနေအထားမျိုးရှိပါတယ်။ နောက်တစ်ယောက်က ဗိုလ်မှူးကြီးခင်မောင်သန်း၊ သူဆိုရင်လည်း စစ်ဦးစီးဗိုလ်မှူးကြီး (ကက (ကြည်း) စစ်ဆင်ရေးဌာန G-1 ကနေ စစ်ဦးစီးဗိုလ်မှူးကြီး(ကြည်း) အဖြစ် ရာထူးတက်ခဲ့ပြီးနောက်) ကနေ၊ “မင်းသွား ခင်မောင်သန်း၊ တပ်မ(၅၅)ဒုတပ်မမှူး” ဆိုပြီးတော့မှ မောင်းထုတ် လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန် အခါတုန်းကတော့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေအနေနဲ့ ပြောပိုင်ခွင့် မရှိဘူးပေါ့ဗျာ။ သူ့ အထက်က ဦးစီးချုပ်က လုပ်တယ်ဆိုတော့ သူက မကျေနပ်ပေမယ့် ငြိမ်ခံ နေရတဲ့ အနေအထားမျိုးရှိပါတယ်။ ကျနော် ဘာဖြစ်လို့ အဲလိုပြောရသလဲဆိုတော့ ကျနော်တို့က ရန်ကုန်မှာ သင်တန်းနည်းပြအရာရှိပေါ့လေ၊ ဒီ ကကလှမ်း (ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန တပ်မတော် ထောက်လှမ်းရေးညွှန်ကြားရေးမှူး ရုံး) နဲ့တော့ အမြဲ သွားဟယ်လာဟယ် အဆက်အသွယ်ရှိတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမောင် အနားမှာနေတဲ့ ဗိုလ်မှူးမြင့်ဦးတို့၊ ဗိုလ်မှူးခင် မောင်စိုး (ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးစောမောင်၏ ကိုယ်ရေးအရာရှိများ) တို့ဆိုတာ ကျနော်တို့ သူငယ်ချင်းတွေပါ။ ကျနော်တို့က အမြဲတမ်း ထိတွေ့၊ ဆက်ဆံ၊ ပြောဆိုနေကြတဲ့ အနေအထားမျိုး ရှိ ပါတယ်။ ကျနော် ကကလှမ်း ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ ပိုသိရပါတယ်။
(ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ခင်မောင်သန်း = "နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ" အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်၊ အဆိုပါစစ်ကောင်စီ စတင်ဖွဲ့စည်းချိန် ၁၉၉၇ခုနှစ်မှ စတင်၍၊ ရန်ကုန်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူးအနေနှင့် ပါဝင်လာခဲ့ပြီး၊ နောက်ဆုံး ဧရာဝတီတိုင်းနှင့်ရခိုင်ပြည်နယ်တို့၏ စစ်ရေးနှင့် အရပ်ဘက်အုပ်ချုပ်ရေးကို ကွပ်ကဲရသော ကစထ(၃ )၏ ကစထမှူး ဖြစ်ခဲ့သူ။ ၂၀၀၈ တွင် ကစထမှူး အဖြစ်မှ အငြိမ်းစားပေးခံရပြီး နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီဝင် အဖြစ်မှပါ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေမှ ဖယ်ရှားခြင်းခံခဲ့ရသူ)
(ကိုကျော်သူ = အငြိမ်းစားဗိုလ်မှူးကြီး ဦးကျော်သူ (စစ်တက္ကသိုလ် အပတ်စဉ် (၁၃) = လက်ရှိ ၀န်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဌ၊ နိုင်ငံခြားရေး ဒု-၀န်ကြီးဟောင်း၊ ကွယ်လွန်သူ သမ္မတဟောင်းနှင့်မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီ ဥက္ကဌဟောင်း ဒေါက်တာမောင်မောင် ၏ သားကြီး)
(ဗိုလ်မှူးအောင်နိုင် (စစ်တက္ကသိုလ် အပတ်စဉ် (၁၆) = ဒေါက်တာမောင်မောင် ၏ သားငယ်)
(ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးချစ်ဆွေ = ၁၉၈၈ အာဏာသိမ်းချိန်တွင် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန စစ်ဆင်ရေးအထူးအဖွဲ့ (၂) ကစထမှူး နှင့် သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဟောင်း)
(ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်မောင်ခင် = ၁၉၈၈ အာဏာသိမ်းချိန်တွင် ဒုတိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ရေ) နှင့် ဒုတိယ ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း)
(ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဘုန်းမြင့် = ၁၉၈၈ အာဏာ သိမ်းချိန်တွင် စစ်ထောက်ချုပ် နှင့် ပြည်ထဲရေးနှင့်သာသနာရေး ၀န် ကြီးဟောင်း)
(ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးချစ်ဆွေ နှင့် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဘုန်းမြင့် တို့အား ၁၉၉၇ခုနှစ်တွင်လည်းကောင်း၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်မောင်ခင် အား ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင်လည်းကောင်း၊ ၄င်းတို့၏ ၀န်ကြီးအဖွဲ့အတွင်း နောက်ဆုံးရာထူးများမှ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေမှ ဖယ်ရှားပစ်ခဲ့သည်။)
ဗိုလ်မှူး အောင်လင်းထွဋ်။ ။ ဟိုဘက်၊ ဆန့်ကျင်တဲ့ဘက်ကို ခုန်သွားတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ ခြံထဲဝင်သွားတဲ့ အကြောင်းရင်းကလည်း ကိုရော်နီ သတိထားမိပါလိမ့်မယ် အဲဒီအချိန်ခါမှာ အခု ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ ဗိုလ်မှူးကြီးကြည်မောင်တို့ရဲ့ “နျုရင်ဘတ် ခုံရုံး”တို့ ဘာတို့၊ ဒါတွေက ဖြစ်လာတဲ့ အချိန်အခါမှာ “သူတို့ အာဏာတောင် မရသေးဘူး၊ အခုကတည်းက လာပြီးတော့၊ ဘာမို့လို့လဲကွ” ဆိုပြီး ဖြစ်ကြတာကိုး၊ အဲဒီအချိန်ကပေါ့ဗျာ။
(ဗိုလ်မှူးကြီးကြည်မောင်တို့ရဲ့ “နုရင်ဘတ် ခုံရုံး” = ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ အပြတ်အသတ်အနိုင်ရခဲ့ပြီးနောက်၊ ပါတီဥက္ကဌတာဝန်ယူထားသည့် ကွယ် လွန်သူ အငြိမ်းစားဗိုလ်မှူးကြီးကြည်မောင်က၊ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးအပြီး နာဇီဂျာမန်ခေါင်းဆောင်များအား စစ်နိုင် မဟာမိတ်နိုင်ငံများက၊ ဂျာမဏီနိုင်ငံ နုရင်ဘတ်မြို့တွင် စစ်တရားခုံရုံး တင်ပြီး စစ်ဆေးအပြစ်ပေးသကဲ့သို့၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဦးဆောင်၍ အစိုးရသစ်ဖွဲ့စည်းပြီးလျှင်၊ မြန်မာ့တပ်မတော်မှ စစ်ခေါင်းဆောင်တချို့အား၊ “နုရင်ဘတ် ခုံရုံး”ကဲ့သို့ ခုံရုံး တင်စစ်ဆေး အပြစ်ပေးတာတွေ လုပ်ကောင်းလုပ်ဘွယ် ရှိမည် ဟု၊ လူသိရှင်ကြား ပြောဆိုခဲ့သည့်ကိစ္စ)
ဦးရော်နီညိမ်း။ ။ စစ်ရုံးထဲမှာ အရင်စည်းရုံးရမှာပေါ့။ စစ်ရေးချုပ်တို့စစ်ထောက်ချုပ်တို့ အဲဒီ “ချုပ်”တွေနဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးတွေနဲ့ သူတို့ယုံကြည်တဲ့လူ လက်တစ်ဆုတ်စာလောက် နဲ့ hint ပေးတဲ့ သဘောလား ခင်ဗျ၊ ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုတော့ ဖယ်ရှားတော့မယ်ဆိုတဲ့ ဟာကို။
(၁၉၈၈ စစ်အာဏာသိမ်းချိန်တွင် စစ်တိုင်း (၉)တိုင်း သာရှိပြီး၊ ၈၈၈၈ လူထုအုံကြွမှုကြီး ဖြိုခွင်းခံရပြီး နောက်ပိုင်း ယခင် အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် (နမခ - မန္တလေး) အား နှစ်ခြမ်းခြမ်း၍၊ အလယ်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် (လပခ - မန္တလေး) နှင့် အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် (နမခ - မုံရွာ) ဟူ၍ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ယခင် အလယ်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် (လပခ - တောင်ငူ) မှ၊ တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် (တပခ - တောင်ငူ) ဟု ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၁၉၉၇ နောက်ပိုင်းတွင်လည်း အရှေ့ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် (ရပခ - တောင်ကြီး) အား နှစ်ခြမ်းခြမ်း၍၊ အရှေ့ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် (ရပခ - တောင်ကြီး) နှင့် တြိဂံဒေသတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် (တသခ - ကျိုင်းတုံ) ဟူ၍ လည်းကောင်း၊ အရှေ့တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် (ရတခ - မော်လမြိုင်) အား နှစ်ခြမ်းခြမ်း၍၊ အရှေ့တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် (ရတခ - မော်လမြိုင်) နှင့် ကမ်းရိုးတန်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် (ကရခ - မြိတ်) ဟူ၍ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် အလယ်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် (လပခ - မန္တလေး) နှင့် တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် (တပခ - တောင်ငူ) တို့မှ နယ်မြေအချို့ကို ထုတ်နှုတ်ပြီး၊ နေပြည်တော်တွင် နေပြည်တော်တိုင်း စစ် ဌာနချုပ် (နပတ) ဟု စစ်တိုင်းအသစ် ထပ်ဖွင့်သည်။ ယခုအခါ စစ်တိုင်းကြီး စုစုပေါင်း (၁၃)တိုင်း ရှိပါသည်။)
(ဗိုလ်ကြီးအုန်းကျော်မြင့် ကိစ္စ = ၁၉ရ၆ တွင်၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသူရကျော်ထင်၏ ကိုယ်ရေးလုံခြံရေးအရာရှိ ဗိုလ်ကြီးအုန်းကျော်မြင့် ဦးဆောင်၍ လူငယ်အရာရှိများမှ၊ ထိုစဉ်က မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီဥက္ကဌ ဦးနေ၀င်းနှင့် ထိပ်တန်းခေါင်းတချို့အား လုပ်ကြံပြီး အာဏာသိမ်းရန် ကြံစည်မှုတွင်၊ ပါဝင်ရန် စည်ရုံးခံရသူ စစ်အရာရှိကြီးတချို့က ကာ ကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် တခြား စစ်ခေါင်းဆောင်များပါ ထိုအကြံအစည်တွင် ပါဝင်နေသလား သေချာ မသိရသဖြင့်၊ မိမိတို့ကိုယ်တိုင် ပါဝင်ရေးကို မဆုံးဖြတ်ရဲပဲ ဖြစ်ခဲ့ကြရသည့် ဖြစ်ရပ်)
ဗိုလ်မှူးအောင်လင်းထွဋ်။ ။ မရှိပါဘူးခင်ဗျ၊ ဒီလို လုပ်တယ်ဆိုတာလည်း officially လုပ်တဲ့သဘောပါပဲ။ hint (သတင်းအရိပ်အမြွက်) က ပေးပြီးသား ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ဗိုလ်မှူးအောင်လင်းထွဋ်။ ။ အဲဒီအချိန်အခါတုန်းက ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသန်းရွှေ နေရာကို ဘယ်သူများ ရမလဲ ဆိုတဲ့ ထင်ကြေးတွေက ကျနော်တို့ စစ်ရုံးထဲမှာလည်း ဖြစ်တယ်။ သံတ မန်တွေ ကြားထဲမှာကော အရပ်သားတွေ ကြားထဲမှာပါ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ ဌာနနဲ့ ဆိုင်တဲ့သတင်းတွေကို ကျနော်ကိုယ်တိုင် ဗိုလ်မှူးကြီးကျော်သိန်း (ဗိုလ်မှူးအောင်လင်းထွဋ်၏ အ ထက်မှ တပ်မတော်ထောက်လှမ်းရေး ‘တိုက်ပွဲဝင်ထောက်လှမ်းရေး’ ဌာနမှူး) တို့ ခရီးသွားတဲ့အခါမှာ၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်နဲ့ ကိုယ်တိုင်တွေ့ပြီးတော့မှ ဒီသတင်းတွေကို ကျနော် ပို့ခဲ့ဖူး ပါတယ်။ အဲဒီ သံတမန်တွေဆီက သတင်းတွေ ဗျာ။ အထူးသဖြင့်တော့ နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးပေါ့၊ နိုင်ငံခြားသံရုံးတွေက လာတဲ့သတင်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ကျနော် တခါ ၀င်သ တင်းပို့ရပါတယ်။ သတင်းပို့တဲ့အခါ “ဗိုလ်ချုပ်၊ ဗိုလ်ချုပ် အပေါ်ကိုတော့ ဒီ သတင်းတွေ ဒီသတင်းတွေ ဖြစ်နေပါတယ်” ဆိုတဲ့ ကြောက်ကြောက်နဲ့ ပါပဲ။ ကျနော်တို့က အဆင့်အများကြီး ကွာတဲ့ အခါကျတော့ ၀င်သတင်းပို့တယ်။ ပို့တဲ့အခါကျတော့ ကျနော့်ကို သူ မော့ကြည့်လိုက်တယ်၊ မော့ကြည့်ပြီးတော့မှ “အောင်လင်းထွဋ် မင်းဘယ်လိုထင်လဲ” ဆိုပြီးမေးတော့ ကျနော်တောင်မှ “ကျနော်မသိပါဘူး” ဆိုပြီးတော့ ပြောရတယ်။ သူ့ကို second man အနေနဲ့ ပေးလိမ့်မယ်၊ ထားလိမ့်မယ်လို့ သူ လုံးဝမျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ် ဖြစ်မ လာတဲ့အခါကျတော့ သူကိုယ်တိုင် feeling ဖြစ်တဲ့ အနေအထားမျိုး ရှိပါတယ်။
ဘွိုင်းကောက် ၂၀၁၀ ဂျာနယ် အတွဲ (၁) အမှတ် (၄)
သခင် အုန်းမြင့် ၏ ဈာပန ဓာတ်ပုံများ
ဗြိတိန်နိုင်ငံဝန်ကြီးနဲ့ မြန်မာ့အရေးလှုပ်ရှားသူတို့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး
zoyarphan & UK
မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံပို့ပေးသော ဆရာဗိုက်ကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါသည်။
၁၉.၉.၁၉၈၈ ရက်နေ့တွင် န၀တစစ်အစိုးရ၏ရက်စက်စွာပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်မှုကြောင့်
အစိုးရ၏ SB ထောက်လှမ်းရေးများကကြွရောက်လာသောသံဃာတော်အရှင်သူမြတ်
အရင်းဖြစ်သူ အသက်(၈၈)နှစ်အရွယ်ရှိ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ် NLD ပါတီဝင်ဒေါ်နီနှင့်
ရှေ့ နေကြီးဘဘဦးအုန်းမောင်၊ရွှေပြည်သာမှ NLD ပါတီဝင် ရဲရဲတောက်ဦးသိန်းအောင်၊
ကဗျာဆရာ သူရဇ္ဈာန်၊အလုံမြို့နယ် NLD လူငယ်ခေါင်းဆောင် ကိုလူမော်လတ်၊ NLD
ပါတီမှ အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်များ၊လှိုင်သာယာမြို့နယ်မှ NLDပါတီဝင်များနှင့်မြောက်ဥက္က
လာမြို့နယ် NLD ပါတီဝင်များလာရောက်ချီးမြှင့်အားပေးခဲ့ကြပါသည်။ရွှေပြည်သာမြို့နယ်မှ
NLD ပါတီဝင် ရဲရဲတောက်ဦးသိန်းအောင်မှ မ၀င်းမော်ဦးအားဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့်(သွေးသစ္စာ)
အမည်ရှိကဗျာကိုလည်းကောင်း၊ကဗျာဆရာ သူရဇ္ဈာန်မှ (အောင်ပွဲရမှ အမျှဝေပါ) အမည်ရသော
ကဗျာတို့ကိုရွတ်ဖတ်ပြီး အလေးပြုခဲ့ကြပါသည်။တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်၊နှစ်ကာလတွေကြာမြင့်ခဲ့ပါသော်လည်း အမှန်တရားအတွက်၊ဒီမိုကရေစီရရှိဖို့အတွက်အသက်ပေးဆပ်သွားကြသောမ၀င်းမော်ဦးကဲ့သို့ကျောင်း
အခု တလော ဖြစ်သွားတဲ့ စစ်တပ်က အရပ်သားတွေကို အကြောင်းမဲ့ သတ်ဖြတ်မှု၊နှိပ်စက်မှုတွေကို သုံးသပ်ကြည့်ရင် ဒီဖြစ်ရပ်တွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာ
ဇိုင်းဂနိုင်းလူသတ်မှုကိုလေ့လာရမယ်ဆိုရင် အရာရှိ(၂)ယောက်က ရပ်ကွက်လူငယ်တွေနဲ့ရန်ဖြစ်တယ်။ဒီကိစ္စက ဒီမှာတင်မပြီးဘဲ သူ့တပ်ခွဲကရဲဘော်တွေကိုခေါ်ပြီး အခင်းဖြစ်နေရာကိုပြန်လာတယ်။သူတို့နဲ့ရန်ဖြစ်တဲ့အထဲက လူ(၂)ယောက်ကို နေရာမှာတင်ပြစ်လိုက်တယ်။ဖြစ်ပွားပုံကရိုးရိုးလေးပါ။ဒါပေမယ့် ထူးခြားမှုက အရာရှိတွေခေါ်လာတဲ့ရဲဘော်တွေထဲမှာ တပ်ခွဲတပ်ကြပ်ကြီး(၁)ယောက်မှမပါဘူးလား?သူတို့တာဝန်ကျတဲ့နေရာကနေ တပ်သားတွေကိုခေါ်လာတဲ့အချိန်က ညသန်းခေါင်အချိန်မှာဘာလို့တပ်သားတွေက Equipment အပြည့်နဲ့ရောက်လာတာလဲ?ရိုးရိုးအရပ်သားနဲ့ရန်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စကို ရဲဘော် (၇)ယောက်လောက်က တုတ်၊ဓားဆွဲပြီးလာလို့မရဘူးလား?တပ်တွေရဲ့ထုံးစံက Equipment အပြည့်နဲ့ တပ်သားတွေအပြင်ထွက်မယ်ဆိုရင် တပ်ရင်းဌာနချုပ်ကိုမဖြစ်မနေအကြောင်းကြားရတယ်။အမိန့်တောင်းရတယ်။တပ်ရင်းမှုးနဲ့ဒု-တပ်ရင်းမှုးက အမိန့်ပေးမှ အပြင်ထွက်လို့ရတယ်။ဒီတော့ ဒီကိစ္စတွေကို တပ်ရင်းမှုးက ဘာမှမသိဘူးလား?ဆိုတဲ့မေးစရာတွေအများကြီးထွက်လာပါတယ်။တပ်သားတွေပစ်ခတ်မှုကိုအမိန့်ပေးတဲ့အရာရှိ(၂)ဦးကကော ဒီကိစ္စရဲ့နောက်ဖြစ်လာမယ့်အကျိုးဆက်ကိုမစဉ်းစားမိဘူးလား?တပ်သားတွေကိုယ်တိုင်ကော မစဉ်းစားခဲ့ဘူးလား?ဒီကိစ္စတွေပြီးသွားတော့ ပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့အရာရှိတွေကော ဘယ်ပျောက်သွားလဲ?ဒါတွေက မေးစရာတွေ၊စဉ်းစားစရာတွေပါ၊။
ဒီအမှုထက်အရင် လှည်းကူးကိစ္စကိုလည်းလေ့လာကြည့်ရအောင်.....အရာရှိရယ်အရပ်သားရယ်ရန်ဖြစ်တယ်၊ရွာထဲကို ရဲဘော်(၅၀)လောက်ရယ် ဗိုလ်မှုးအဆင့်ရှိသူတစ်ယောက်ရယ်လာပြီးရန်ဖြစ်တဲ့သူတွေကိုရှာတယ်။ညကျတော့ ယူနီဖောင်း၊လက်နက်အပြည့်အစုံနဲ့ရွာသားကိုလာရှာတယ်။ရိုးရိုးအရပ်သားတစ်ယောက်နဲ့ရန်ဖြစ်တာကို တပ်ခွဲတခွဲစာရှာဖွေရေးလုပ်တယ်ဆိုတာ တော့ ယုတ္တိမတန်သေးပါဘူး။
(၁) အရာရှိတွေသာ ပြဿနာဖြစ်တယ်။ရိုးရိုးရဲဘော်တွေဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။
(၂) ပြဿနာကို ပိုမိုကြီးမားအောင် အင်အားသုံးဖြေရှင်းတယ်။
(၄)ပြဿနာတိုင်းဟာ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်များစွာကလို မဟုတ်ဘဲ Mediaပေါ်အမြန်တက်လာတယ်။(မြန်မာပြည်မှာ တိုင်းရင်းသားတွေဒီလောက်နှိပ်စက်ခံရတာ အစိုးရက ဘာသံမှမကြားအောင်လုပ်ခဲ့တယ်။)
ဒီလိုပြဿနာတွေဖြစ်တာကိုစဉ်းစားကြတော့ ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြောင်းရင်း (၂)ချက်ကိုတွေ့တယ်။
(၁)ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲဆွယ်စည်းရုံးမယ့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကို သွယ်ဝိုက်ခြိမ်းခြောက်တာလား?
(၂)ဒီလိုကိစ္စတွေက စစ်အစိုးရအုပ်ချုပ်နေတဲ့အချိန်မှာတွေ့ရမှာပဲ။ဒီ ရွေးကောက်ပွဲကို လက်ခံရင် ဒါတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့သတင်းပေးချင်တာလား?
ဒီကိစ္စတွေကို စဉ်းစားကြည့်ကြရရင်တော့ အဖြေတွေထွက်လာမှာသေချာပါတယ်...........
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးစောမောင်ကို န၀တဥက္ကဋ္ဌ ရာထူးကနေ ဖယ်ရ...